Sezvo ini ndichipururudza kuburikidza neangu Instagram feed mazuva ese (kukosora, kukosora… kakawanda pazuva), ini ndinogara ndichiona zvitsva zvinyorwa uye nyaya na Iyo Frye Kambani. Ndagara ndichifarira shangu, mbatya, uye zvekushandisa, asi ndinodawo zvemukati zvavanogovana pane yavo Instagram nhoroondo.
Zvinyorwa zvavo zviri pa-brand, zvekugadzira, uye zvinofadza. Mifananidzo yavo yese ine sefa imwechete pavari kuti vaone kuti vanowirirana - izvi zvinoita kuti yavo Instagram chimiro chioneke sehunyanzvi, hunyanzvi, uye chakarongeka kana vashanyi, seni, vatarisa peji ravo.
Akaundi yaFrye's Instagram inokurudzirawo kudyidzana pakati pekambani nevateveri vavo nekuvapa chaicho hashtag kushandisa kuti vagone kuratidzwa paaccount pavanotumira pikicha ine Frye chigadzirwa.
Akaundi yaFrye Instagram muenzaniso wakanaka wekushambadzira midhiya yenhau - inokwezva, zvakajeka Frye, inobata vateveri vavo makumi maviri nevaviri, uye inosimudzira zvigadzirwa zvavo.
Asi nei kushambadzira midhiya yenhau kuchikosha? Nei uchifanira kushandisa nguva kugadzira masocial media maakaundi ebhizinesi rako? Uye unoita sei chaizvo kuvaka gwara rezvenhau rekushambadzira izvo zvinoshandira yako chaiyo mhando bhizinesi?
Muchirongwa ichi, isu tichavhara mhinduro dzemibvunzo iyi yese - asi kutanga, ngatitsanangure kushambadzira kwemagariro.
Zvemagariro midhiya kushambadzira ndezvekusangana neako tarisiro vateereri uye vatengi kwavari uye sezvo ivo vachifambidzana vachifambidzana pamwe neako neako brand.
Nepo kushambadzira midhiya yenhau seyakazara kunokosha uye kunobatsira mukukura kwebhizinesi rako (sezvaunoona muchikamu chinotevera), zano rako richasiyana zvichienderana ayo masocial network vateereri vako vanopedzera nguva yavo pairi.
Tisati tachera zvakadzika mukushambadzira midhiya yenhau, ngatiitei chidimbu zano racho nepuratifomu.
Users: 1.79 mabhiriyoni vashandisi vanoshanda mazuva ese pasirese
Vateereri: Chizvarwa X uye millennials
Best for: Brand kuziva; kushambadza
Users: mamiriyoni 186 vashandisi vanoshanda mazuva ese pasirese
Vateereri: Kunyanya zviuru zvemamirioni
Maindasitiri anokanganisa: B2B uye B2C
Best for: Veruzhinji hukama; Mabatiro evatengi
Users: 1 mabhiriyoni pamwedzi vashandisi vanoshanda
Best for: Midhiya-inotaridzika yemidhiya, kuseri-kwe-zviitiko, uye zvemukati-zvinogadzirwa zvemukati; kushambadza
Users: mamiriyoni 675 pamwedzi vashandisi vanoshanda pasirese
Vateereri: Vacheche boomers, Chizvarwa X, uye zviuru zvemamirioni
Best for: B2B hukama, bhizinesi kusimudzira, uye kushambadzira basa
Users: Vanopfuura mabhiriyoni maviri logged-mumwedzi vashandisi pasi rese
Vateereri: Millennials, inoteverwa zvakanyanya neGeneration Z
Best for: Brand kuziva; varaidzo, uye sei-kumavhidhiyo
Users: mamiriyoni 249 vashandisi vanoshanda mazuva ese pasirese
Vateereri: Kunyanya Chizvarwa Z
Users: mamiriyoni 416 mwedzi wega wega vanoshandisa vashandisi pasi rese
Vateereri: Kunyanya akura ezviuru zvemamirioni uye vadiki vacheche boomers
Best for: Kushambadzira kunoonekwa; kurudziro
Zvino zvatave nekutsanangura zvakakosha zvega zvega zvemagariro netiweki, ngatikurukurei kuti nei kushambadzira midhiya kunobatsira bhizinesi rako.
Kubatsira kweSocial Media Kushambadzira
Pane zvikonzero zvakasiyana siyana nei kambani yako ichifanira kushandisa kushambadzira midhiya yenhau. Isu takagadzira runyorwa rwezvikonzero zvina zvinonyanya kukosha zvekufunga nezvazvo.
1. Wedzera Brand Kuzivisa
Muna 2018, pakanga papera 3.2 mabhiriyoni evanhu pasocial media pasirese. Nekuda kwehuwandu hwakawanda hwevanhu pasocial media, unogona kuona kuti nei kuve nechokwadi chekuti bhizinesi rako riri kugovana zvemukati zvine chekuita nezvako zvigadzirwa pamwe neruzivo nezvekambani yako kuburikidza nepuratifomu kana maviri ane mukana wekubatsira iwe kuvandudza brand awareness.
Muchokwadi, midhiya yemagariro yakaratidzirwa kune wedzera brand kuziva nekutyaira kumusoro kubatanidzwa. Zvekudyidzana kusangana zvinosanganisira zvinhu zvakaita sekutaura, kuda, kugovera, uye kutumirazve. Zvemagariro midhiya zvakare zvinokubatsira iwe kuwedzera brand kuziva nekutungamira traffic yakanangana newebsite yako. Iwe unogona kuita izvi nekubatanidza akananga akanangana newebsite yako mune yako nhoroondo, bio, uye zvinyorwa.
Maitiro Ekuvaka Brand kune Yako Kambani
2.Gadzira Kutungamira uye Boost Shanduko
Kukurudzira uye kugovana zvigadzirwa zvako pasocial media inzira yakapusa yeku kunatsiridza kutungamira chizvarwa, wedzera kutendeuka, uye wedzera kutengesa nekuti urikushambadzira kune vanhu vakasarudza kuita newe nekutevera account yako.
Heano mimwe mienzaniso yenzira dzaungaite shandisa pasocial media kugadzira mamwe mafambiro.
Gadzira makwikwi kuti vashanyi vako nevateveri vatore chikamu mune ako enhau maficha.
Sanganisira zvinongedzo kune yako webhusaiti uye zvinopihwa muzvikamu zvebio zvemaprofiles ako.
Gara mavhidhiyo aripo kuita zviziviso nezvezvigadzirwa uye nekupa zvinyorwa kana ruzivo pamusoro penyaya dzinonakidza kukambani yako.
Shandisa a social media kushambadzira mushandirapamwe pane imwe yemakero ako.
Tengesa zvigadzirwa zvako kuburikidza nezvako zvemagariro profiles. Semuenzaniso, unogona kugonesa Facebook's Shop Chikamu or Instagram's Shopping chinhu pane ako ma profiles. Aya maficha anotendera vashanyi vako uye vateveri kubaya pane zvigadzirwa zvawakagovana muzvinyorwa kuti utarise ruzivo rwakaita semutengo, zvinhu, uye saizi. Ipapo, vashanyi vanogona kuenderera nyore kuenda kubindu kuburikidza nepuratifomu uye vatenge chigadzirwa kubva kwauri.
3. Kukurudzira Hukama Nemakasitoma
Nokubatanidza uye nekubatana nevateveri vako venhau venhau, iwe unozogona kuvaka hukama hunogara pakati pavo nebhizinesi rako. Iwe unogona kuita izvi nekudyidzana navo pane zvako zvinyorwa, kupindura kumibvunzo yavo uye zvirevo, uye nekuvapa chero rubatsiro rwavanogona kuda.
Iwe unogona zvakare kubvunza vateveri vako mibvunzo nezve zvigadzirwa zvako, avo marwadzo poindi, kana kugadzira mapaipi ekukubatsira iwe kuvaka kuvimba uye kuvaratidza iwo kuti unokoshesa sei yavo yekuisa uye rutsigiro.
4. Dzidza Kubva Kumakwikwi
Zvemagariro midhiya inzira huru yekuchengeta matabo pavakwikwidzi vako - kunyangwe zviri maererano nemaitiro avo enhau, zvigadzirwa zvavari kusimudzira, izvo mishandirapamwe ivo vari kuita, kana yavo nhanho yekudyidzana nevateveri.
Zvemagariro midhiya zvinokutendera iwe kuti utarise izvo zviripo uye zvisiri kushandira makwikwi ako, uye nekudaro zvinokubatsira iwe kusarudza izvo zvinofanirwa kana hazvifanirwe kuchinja maererano ne dzako maitiro ekambani. Chekupedzisira, kuongorora magariro account evanokwikwidza kunogona kubatsira iwe kuona kuti kushambadzira kwako kwakamira pachena uye kwakasarudzika kune yako brand.
Dzidza maitiro ekuita kukwikwidza kuongorora kuti uone kuti ungakunda sei makwikwi.
Zvino, ngatitaurei zano - pane matanho mashanu ekuti ita shuwa kuti yako yemagariro midhiya yekushambadzira chirongwa chinochengetedza uye zvinokanganisa bhizinesi rako.
Ngativhare matanho aya zvakadzama kuitira kuti utange kuashandisa kubhizinesi rako.
1. Tsvagurudza yako buyer manas nevateereri.
Nhanho yekutanga yekugadzira yemagariro midhiya kushambadzira zano kuona kuti ndiani wako buyer personas uye vateereri kuitira kuti ugone kunanga zvavanoda uye zvavanofarira nenzira kwayo. Kuti uite izvi, funga nezve vanhu vauri kuedza kusvika uye nei, uye kuti ungavaronga sei seboka. Semuenzaniso, kana kambani yako ikatengesa leggings ine mutsindo uye vanomhanyisa, unogona kusarudzira vateereri vako semamireniyamu vanoda kupfeka nguvo dzemitambo dzakashongedzwa - chimiro chinozivikanwa se mutambo.
Nekutarisa munhu wako mutengi nevateereri, iwe unozobva wakwanisa kuona izvo zvemukati zvinokwezva vateveri vemhando nevatengi vaunotarisira kuwana uye nemabatiro aungaita zvemukati zvekuita kuti vateveri vako vafarire.
Mutengi Persona Matemplate
Gadzira My Persona Chishandiso
2. Sarudza kuti ndeapi mapuratifomu aunoshambadzira.
Semushambadziro wezvemagariro, zvakakosha kuti uone kuti mapuratifomu auri kugovana zvemukati zvako. Iko hakuna hazvo mhinduro chaiyo kana isiriyo kana zvasvika pane nzira dzezvemagariro bhizinesi rako raanofanira kushandisa - zviri pamusoro pezvinodiwa zvevateereri vako uye nekwavanowanzo shandisa nguva yavo.
"Zvakakosha kuve kune vateereri vako vevangangove vatengi nhasi, uye kwavanogona kunge vari mangwana. Zvirinani kutungamira kumberi pane kuseri. ” - Andrew Delaney, weSocial Media Kushambadzira maneja kuHubSpot
Semuenzaniso, kana iwe uri kuenda kune iyo tarisiro vateereri vevamhanyi-vanoda mamirioni, iwe ungangoda kutarisisa ruzhinji rweyako midhiya enhau kuedza Instagram - izvi imhaka yekuti Zviuru zvemakore kufukidza chikamu chikuru chevashandisi papuratifomu.
Nongedzo yaMarketer kune Snapchat yeBhizinesi
50 Facebook Ad Mienzaniso Isu Takanyatso Dzvanya
YouTube yeBhizinesi: Iyo 30-Mazuva Mugwagwa Wekukura
Mashandisiro Ekushandisa Twitter yeBhizinesi (+ Muteveri Wekutevera Template)
12 Pinterest Matemplate eBhizinesi
3. Gadzira yakasarudzika uye inobata zvemukati.
Nemabhiriyoni evashandisi venhau venhau kutenderera pasirese, hapana mubvunzo kuti kanenge vamwe yevateveri vako - kana vanhu vanoongorora nhoroondo yako - vaonawo zvemukwikwidzi wako kana zvemamwe mabhizimusi muindastiri yako. Ndicho chikonzero iwe uchifanira kuve nacho kuita zvemagariro zvemukati zvemukati izvo zvinomira pachena uye zvinopa vatariri chikonzero chekubaya bhatani rekuti "Tevera" uye nekudyidzana nekara rako.
Kuti ikubatsire kuve nehunyanzvi, funga zvirimo zviri kukwikwidzwa nevakwikwidzi uye nemabatiro aunogona kuita iwe pachako zvigadzirwa zvako. Zvakare, tora mukana wezvinhu zvinopihwa neplatifomu yauri kushandisa. Semuenzaniso, unogona kugadzira mavhidhiyo aripo paFacebook kuti ugovane ruzivo rwekupedzisira nezve chigadzirwa kuvhura kana kuitisa kupihwa kupi.
Chekupedzisira, shandisa ako aripo vatengi uye vanosimudzira kukubatsira iwe kugadzira zvemukati. Iwe unogona kuita izvi nekutumirazve zvinyorwa zvavo kana kuvakurudzira kuti vashandise hashtag kugovana zvavo zviitiko uye mapikicha nezvigadzirwa zvako (zvakafanana neFrye's Instagram hashtag yandakambotaura kare).
4. Ronga purogiramu yezvinyorwa zvako.
Imwe yedzakareruka nzira dzekuona kuti zvemukati zvakagovaniswa sezvakarongwa ndezvekushandisa magariro enhau manejimendi mhinduro. Zvishandiso izvi zvinokutendera iwe kunyora zvinyorwa, kugadzirira mifananidzo nemavhidhiyo, uye kuronga masisitendi pamberi. Ivo zvakare vanogovana zvavo zvemukati pane purogiramu uye tarisisa zvese zvekudyidzana kwemashure uye kubatanidzwa kwako. Zvemagariro midhiya manejimendi mhinduro zvinokuchengetedza nguva uye zvinokutendera iwe kuti utarise pane ako mamwe mabasa.
Kune akatiwandei emhinduro sarudzo dziripo - heino mienzaniso mishoma.
HubSpot inopa chishandiso chemagariro - sechikamu cheiyo marketing software - kukubatsira kushambadza uye kuongorora zvirimo uye kugadzira chaiko kubatana nevateveri vako. Iwe unogona kuronga uye kutsikisa zvirimo zvako pamberi uye enzanisa zvakadzama mishumo pane ako maposita 'kubatanidzwa kuti unzwisise mashandiro emapuratifomu akasiyana siyana, mhando dzezviri, uye nguva dzekutumira.
2) Humera Zvemagariro
Kukura Kwemagariro yemagariro enhau kushambadzira uye manejimendi mhinduro yakagadzirirwa kubatsira timu yako kuronga uye kuronga zvemukati zvemukati, maneja macampaign, kunzwisisa kuita, uye kuongorora zvemukati zvinyorwa uye kuongorora
Hootsuite inzvimbo yemagariro manejimendi manejimendi ekutsvaga, kuronga, manejimendi, uye kuburitsa pane zvako zvemukati. Iwe unogona kuronga zvinyorwa pamberi pezvi zvose yemagero ako panguva imwe uye kuyera yako ROI ine yakazara yezvinyorwa ongororo.
Unofanira kutumira kangani pasocial media?
Iye zvino, unogona kunge uchinetseka kuti kangani kaunofanirwa kutumira zvemukati pane ako enhau midhiya.
Semutemo wechigumwe, iwe unofanirwa kungotumira pasocial kana uine unhu zvemukati zvekugovana. Zvichireva, pane chikonzero urikutumira zvirimo. Aya ndiwo maratidziro aunoita chiyero chakakodzera kana zvasvika kune yako yekutumira frequency. Ukatumira futi kashoma, iwe unosungirwa kukanganikwa nevateveri vako. Ukatumira futi itika kakawanda, ungangove unotsamwisa vateveri vako. Mamiriro ezvinhu ese ari maviri anogona kutungamira mukurasikirwa nevateveri uye kuderera kwekuita.
Kuti udzivise izvi, kune zvakawanda zvezvidzidzo uye zviwanikwa zviripo zvinotsanangura pasocial media post frequency frequency neindasitiri uye chikwiriro kuti iwe utevere. Bhizinesi rega rega rakasiyana, saka tsvaga zvinoshanda kune vateereri vako. Ipapo, iwe unogona kutanga kuyedza nezvakawanda kana zvishoma zvinyorwa, pamwe nezvimwe zvinhu zvakaita seiyo nguva yezuva iwe yauri kutumira pasocial, kuona kuti chii chinopa mwero wepamusoro wekubata.
5. Ongorora maitiro ako uye mhedzisiro.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvekushambadzira midhiya enhau ndechekuona kuti zvaunoita zvabudirira mukukubatsira kuzadzisa zvinangwa zvako. Kuti uone izvi, iwe uchafanirwa kuteedzera zvese zvako zvemapositi, pane yega chiteshi. Iwe unogona kuita izvi nekudzokorora uye kugadzirisa ako enhau midhiya metrics.
Zvemagariro enhau metrics data dzakanangana nekubudirira kwemapositi ako uye zvaunoita kune vateereri vako uye vatengi pane akasiyana mapuratifomu. Aya metric anogona kusanganisira dhata nezve yako nhanho yekubatana, kuda, inotevera, migove, uye kumwe kumwe kudyidzana papuratifomu imwe neimwe.
Heano gumi emametric akakosha aunoteedzera.
Kuzvipira: Izvi zvinosanganisira kudzvanya, kutaura, kufarira, uye kupindura pane ako enhau midhiya. Kune mamwezve mapuratifomu-akasarudzika marudzi ekubatana akadai se "Akaponeswa"Zvinyorwa pa Instagram uye"Yakapetwa”Zvinyorwa paPinterest.
Tsvaga: Kuwanda kwevanhu vakaona chero zvemukati zvine chekuita neyako peji kana chimiro ndiko kwako kusvika.
Followers: Iyi ndiyo nhamba yevanhu vaunayo paprofile yako vakadzvanya bhatani rako re "Tevera" uye ona zvemukati mune zvavo zvekudya.
Zvinyorwa: Iyi ndiyo nhamba yenguva dzekutumira kubva paprofile yako kana peji inoonekwa, kungave kana kwete vateereri vako nhengo pazviri. Izvi zvinowanzoitika kana mumwe munhu achipururudza kuburikidza nenhau yavo, asi asingabatise chero chinhu.
Video maonero: PaFacebook, Snapchat, Instagram, kana chero imwe nzira yemagariro ine vhidhiyo kugona, iyi ndiyo nhamba yemawonero anowana imwe neimwe.
Nhoroondo yekushanya: Huwandu hwevanhu vakavhura rako rezvenhau peji ndiyo yako nhamba yekushanya kweprofile.
Kutaura: Iyi ndiyo nhamba yenguva iyo nhoroondo yako yakataurwa nenhengo dzevateereri mumaposita avo.
Tags: Apa ndipo apo vateereri vako vanowedzera zita rezita rekambani yako kana hashtag kune imwe posvo.
Kudzokorora: Apa ndipo apo nhengo yevateereri vako painotumira chidimbu chezvako zvemukati paprofile yavo.
mugove: Aya ndiwo mapositi vateveri vako nevateereri vanotora kubva paprofile yako uye vagovana netiweki yavo.
Iwe unogona kufurira ese aya metric, wedzera yako yemagariro inotevera, uye nekuvandudza kwese kubatanidzwa pane yako profiles uchishandisa iwo iwo maitiro aunoda gadzira zvinotungamira uye zvinowedzera shanduko. Iwe unogona zvakare kutaurirana nevateveri vako kazhinji nekutaura navo, kuvamaka mune zvemukati, kupindura mibvunzo yavo, kufarira zvavanotumira, kuvakurudzira kushandisa ma hashtag, uye kugovana zvirimo (uye iwe unogona zvakare kudzoreredza zvemukati-zvinogadzirwa) .
Maitiro Ekuyera Zvemagariro Media Metrics
Iwe unogona kuongorora masocial media metric munzira dzakasiyana siyana, Semuenzaniso, unogona kushandisa maturakiti maturusi akavakirwa mumapuratifomu akasiyana aunoshandisa. Heano mienzaniso mishoma:
Iwe unogona zvakare kusarudza kushandisa analytics uye chekushandisa chekushandisa senge Google Analytics. Iyi sarudzo huru kana iwe uchida kuteedzera yako yemagariro midhiya uye webhusaiti metric. Chekupedzisira, vazhinji pasocial media kuronga mhinduro - sekuongorora kwatakaita kare - kuve neakawongorora uye ekuteedzera maficha otomatiki akavakirwa mukati. Ese aya mameturu ekushandisa maturusi anokupa iwe kunzwisiswa zvirinani kune izvo vateveri vako nevateereri vanopindura zvakanaka kune uye zvaunofanira kufunga kugadzirisa kuti uvandudze kusangana.
Izvozvi zvataongorora zvakanakira kushambadzira midhiya enhau uye maitiro ekuvaka zano rako, ngatitaurei nezve zviwanikwa zvakasiyana zviripo kuti zvikubatsire munzira.
Social Media Kushambadzira Zviwanikwa
Kune plethora yemagariro enhau kushambadzira zviwanikwa zvaunogona kushandisa kuvaka gadziriso yenzvimbo yekambani yako. Unosungirwa kunzwa uine chivimbo pamusoro pekushanda pane yako kambani yemagariro media kushambadzira nerubatsiro rweanotevera makosi, kudzidziswa, uye mabhuku.
Social Media Kushambadzira Makosi uye Kudzidziswa
Hedzino nhatu nzira dzekuwana dzidzo mumunda wehukama enhau kushambadzira kana iwe uchinzwa zvichidikanwa kune yako chaiyo bhizinesi mamiriro.
1. Wana dhigirii.
Kunyangwe pasina hazvo "degree rezvekushambadzira rezvenhau" revasina kudzidza, pane epamhepo makosi anopiwa kuzvikoro zvakasiyana siyana nemasangano iwe aunotora kuti uwane a setifiketi, MicroMaster's or dhigirii wechikoro mumunda.
2. Shandisa webhusaiti yekudzidza pamhepo.
Lynda ndeimwe huru sosi yekudzidzisa. Iyi webhusaiti yekudzidza pamhepo inopa dzidziso, dzidziso, uye makosi pane akasiyana misoro mukati memunda we evanhu vezvenhau Marketing.
3. Tora gwaro rinotarisirwa nekambani.
Unogona kusarudza kuwana chitupa kubva kukambani - senge HubSpot's social media certification. Ichi chemahara chitupa chinokudzidzisa maitiro ekubatana nevatengi vako uye nekuvandudza shanduko. Iwe zvakare uchawana kunzwisiswa kuri nani kwemaitiro ekuvandudza yako zano, wedzera kusvika kwako, uye kuyera yako yemagariro midhiya ROI.
Social Media Kushambadzira Mabhuku
Kuverenga zvine chekuita nezve zvemagariro enhau kushambadzira ndiyo imwe nzira yakanaka yekudzidza zvakawanda nezve munda. Heano mienzaniso mishoma yemamwe anoonekwa zvakanyanya mabhuku pamusoro wenyaya.
1. Anodiwa Masocial Media: Maitiro Ekufadza Vatengi Vako, Gadzira Irresistible Brand, uye Iva Kazhinji Unoshamisa paFacebook NaDave Kerpen
Iyi New York Times Bestseller inovhara zvikonzero nei kudiwa nekuita nevateveri pasocial media ndeimwe yenzira dzakasimba kwazvo dzekukura hwaro hwevatengi nevasimudziri. Iri bhuku rinokudzidzisa maitiro ekuita zvinokanganisa zvemukati zvevateveri vako kuti vapindirane uye vagovane nazvo zvavo network. Munyori Dave Kerpen anotsanangurawo nei uchifanira kuve nechokwadi chekuti unogara uchifadza vateveri vako kuti vasarasikirwe navo chero nguva.
2. Jab, Jab, Jab, Kurudyi Hook: Maitiro Ekuudza Yako Nyaya mune Ruzha Yemagariro Nyika NaGary Vaynerchuk
Sekureva kwemunyori Gary Vaynerchuk, kiyi yekubudirira kwevezvenhau kushambadzira hakusi kwekubuditsa zvirimo zvakawanda - ndezve kuburitsa zvinhu zvakanangana nevateereri vako uye kushandisa chikuva chakakodzera kuzviita.
Mubhuku rake, Vaynerchuk anofukidza maitiro ekuita izvi pamwe nekubatana nevateveri vako uye vatengi padanho rakadzika kuburikidza nesocial media. Iwe unozodzidza maitiro ekugadzira zvisingakanganwike uye zvakasarudzika zvemukati izvo zvinomira kunze mukuenzanisa kune zvemakwikwi zvemukati.
3. Iyo B2B Yemagariro Media Bhuku: Iva Kushambadzira Superstar nekugadzira Zvinotungamira neBlogging, LinkedIn, Twitter, Facebook, Email, uye Zvimwe. rakanyorwa naKipp Bodnar
HubSpot's CMO, Kipp Bodnar, inonyora nezvenzira dzebhizinesi dzeB2B dzinogona kuburitsa mamwe mafambiro uye shanduko kuburikidza nekushambadzira midhiya yenhau. Kune nzira dzinoshandisika dzaunotora kuti uwedzere hwaro hwevateveri uye kutyaira zvinotungamira pamwe nekunzwisisa iyo ROI yenzvimbo dzakasiyana dzeB2B yemagariro midhiya ekushambadzira nzira.
Kutanga Kushambadzira paSocial Media
Tichifunga kuti kune mabhirioni avanhu pasocial media nhasi, zviri nyore kuona kuti nei mabhizinesi mazhinji nevashambadzi vachishandisa chiteshi kusimudzira zvigadzirwa zvavo uye kuita nevatengi.
Kunyangwe kusarudza dzako kambani yemagariro enhau maitiro angaite seanotyisa, unogona kudzivirira kunzwa kunetseka nekunzwisisa pasocial media kushambadzira maitiro uye kushandisa zvimwe zviwanikwa zviripo pamusoro wenyaya. Nekudaro, tanga kushanda pane rako bhizinesi 'rezvenhau kushambadzira zano nhasi kuti uwedzere nhamba yako yevateveri, kuvandudza kubatanidzwa, uye kukurudzira kutendeuka.
Ndeapi Masocial Networks aunofanirwa Kushambadzira pa2021?
Iyo Yakanakisa Yemagariro Media Management Zvishandiso